LA OGAADAY: Liiskii Ciyaartoyda Ee Uu Sir Alex Ferguson Ka Doonayay Man United Oo Lagu Dhex Arkay Vincent Kompany. - Gool24.Net
LA OGAADAY: Liiskii Ciyaartoyda Ee Uu Sir Alex Ferguson Ka Doonayay Man United Oo Lagu Dhex Arkay Vincent Kompany.
Sir Alex Ferguson ayaa seegay fursada uu kula saxiixan karayay kabtanka hadda Man City ka baxaya ee Vincent Kompany waxaana lagu dhex arkay liiska ciyaartoydii suuqa ee uu Sir Alex Ferguson ka doonayay Man United.
Vincent Kompany ayaa lagu qiimeeyay mid ka mid ah tobankii kabtan ee kubbada cagta England abid ugu fiicnaa kadib taariikhdii waynayd ee uu Man City ka soo sameeyay.
Laakiin Sir Alex Ferguson ayaa Vincent Kompany u calaamadsaday ciyaartoydii uu Manchester United ka doonayay sanadkii 2004 kii waxaana sidoo kale la helay liiska ciyaartoydii uu waqtigaas u diyaarsaday in uu la soo wareegto.
Dhokument la helay ayaa lagu ogaaday in sanadkii 2004 kii uu Sir Alex Ferguson kooxdiisii Man United ka doonayay shan bartilmaameed oo kala ahaa Gabriel Heinze, Philippe Mexès, Vincent Kompany, Gerard Pique iyo Alan Smith.
Saddex ka mid ah shantan ciyaartoy ee uu waqtigaas Sir Alex calaamadsaday ayay Man United la soo wareegtay halka laba kale ay seegeen in ay soo iibsadaan.
Man United ayaa markaas la soo saxiixatay Gabriel Heinze, Gerard Pique iyo Alan Smith waxayna seegeen Philippe Mexès iyo Vincent Kompany oo markii danbe ka mid noqday difaacyadii ugu fiicnaa.
Philippe Mexès ayaa markaas 22 sano jir kaliya ahaa wuxuuna kadib waqti fiican ku soo qaatay kooxaha AC Milan iyo Roma halka uu xulka qaranka France u saftay 29 kulan.
Laakiin Vincent Kompany oo uu Sir Alex Ferguson la soo saxiixan waayay sanadkii 2004 kii ayaa kadib ku biiray Man City wuxuuna ka mid noqday difaacyada aduunka ugu fiican ee waliba dhibaatada badan ku soo abuuray Man United.
Waxa kale oo xogtan lagu helay in waqtigaas uu Sir Alex Ferguson uu waqtigaas doonayay goolhaye Ton Heaton iyo Phil Bardsley oo hadda ka wada tirsan kooxda Burnley.
Laakiin kadib Man United ayaa xili danbe liiska kooxdeeda ku soo darsatay Wayne Rooney oo ahaa da’yar ka tirsanaa kooxda Everton.
Laakiin xili ciyaareedkii uu Sir Alex Ferguson la soo saxiixan waayay Kompany waxay kooxdiisu ku dhamaysatay 77 dhibcood oo Premier League ah iyaga oo 18 dhibcood ka hooseeyay Chelsea.